नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कार देख्दा.....!
तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कार देख्दा.....!
स्याबास बल्छी धुर्बे, राजु मास्टर र हल्का रमाइलो टिमका सहयोगी कलाकारहरू !
तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कार देख्दा वाक्क दिक्क भएर हरेक वर्ष लेख्ने, बोल्ने म जस्तो मनुवालाई पनि साथ दिने मान्छे रहेछन् देशमा, विरोध गर्ने काम सुरु भएछ नेपालमा पनि । तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कार र विकृति का विरुद्ध आवाज उठाउन, कार्यक्रमहरूमै ब्यङ्ग गर्न थालिएछ खुसी लाग्यो ।
नेपालमा अहिलेको पुस्ताका लोकप्रिय कलाकार मरीचमान श्रेष्ठ उर्फ बल्छी धुर्बे, राजु मास्टर र उनीहरूको टिम हल्का रमाइलोका सहयोगी कलाकारहरूको यो हप्ताको प्रस्तुति देखेर खुसी मात्र लागेन खुल्ला दिलले प्रशंसा गर्न मन लाग्यो । धेरै धेरै धन्यवाद बल्छी भाइ, राजु भाइ र सबै कलाकारहरूलाई । विकृति र विसङ्गतिलाई बोक्ने आफ्नै सहयात्री कलाकार होउन् वा भाइरल बन्ने लालसामा गलत बाटो हिँडिरहेका जो सुकै होउन्, यसरी नै ब्यङ्ग गरेर र जन चेतना जगाएर सही बाटोमा ल्याउन प्रयास गर्नै पर्छ । तपाईँहरूको यो ब्यङ्गले उनीहरूको चेत खुलोस् । दर्शक श्रोताले पनि तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कारलाई यसै गरेर सभ्य तरिकाले आवाज उठाउने र फिल्टर गर्ने गर्नै पर्छ । स्याबास तपाईँहरू सबैलाई !
अरू सबै अग्रज, सहयात्री र अनुज कलाकार मित्रहरू !
कृपया क्षणिक भाइरल हुने भ्रम बाट हामी सबै मुक्त हुनै पर्छ । तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कारलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर रोक्नै पर्छ । हामीले नेपालमा धर्म, कर्म, अनुशासन देखी लगभग सबै कुरा त खायौँ खायौँ बिन्ती छ तीज गीत र संस्कृति पनि खाने काम नगरौँ । तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कार र विकृति लाई रोक्न सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिऊँ ।
दर्शक श्रोता महानुभावहरू !
हामी कलाकारहरूको भगवान्, न्यायाधीश जे जे भने पनि यहाँहरू नै हो । प्रस्तुति सही या गलत छुट्टाइदिनुहुन, तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कार रोक्न मद्दत गरिदिनुहुन सादर आग्रह गर्दछु ।
पत्रकार मित्रहरू र मिडियाहरू !
कृपया तपाईँहरूले तीज गीत र संस्कृति माथिको बलात्कार लाई प्रश्रय दिने, तिनै लाई भाइरल बनाउने, असली गीत र संस्कृति लाई छायाँ पार्ने काम तत्काल बन्द गरिदिनुहुन विनम्र आग्रह छ ।
* रामप्रसाद खनाल - अध्यक्ष एवम्
www.IAFAmerica.com / www.RamPrasadKhanal.com
बुझ्नेहरुलाई काफी छ हल्का रमाइलोको यो हप्ताको एपिसोड र ब्यङ्ग !
एक हप्ता अघिको मेरो एउटा स्टाटस जस्ताको तस्तै :
हामीले यसरी गाउँथ्यौँ तीजका गीतहरु र सन्देश दिने प्रयास गर्थ्यौँ पहिले पहिले ।